Ihe Ntanye USB, Na-ejuputa Ihe, Ihe Mgbochi - Otu WORLDWA
Extrusion Ihe Usoro
Na-ejuputa usoro ihe
Ọkara conductive Mezie Series
Ire ọkụ-retardant Mezie Series
Metal Mezie Series
Ọla kọpa Clad Aluminium-magnesium Alloy Waya
Ugboro abụọ kwadoro Fiber Cloth Sịntetik Mica Mezie
Ọla kọpa Foil Mylar Mezie maka USB Shielding
Polyester Nkiri / Polyester Mezie / Mylar Mezie
Galvanized Steel Waya maka USB Stranding
Ọkara-akpa naịlọn Mezie
Non-kpara Fabric Mezie
Ọkara eduzi Filler eriri
Gbado anya na waya na mkpebi USB
Nyere waya na eriri ụlọ ọrụ mmepụta ihe ngwa ngwa
Na-eduga site na teknụzụ kachasị elu
Na anyị technicians na mmepụta technology, na-akwado waya na USB guzobe nnyocha center, ndị ọrụ ibe, ịzụlite waya na USB ihe na mma arụmọrụ na ala na-eri.
100% kwere nkwa
Ihe nlele efu maka ule (Gụnyeghi ihe extrusion)
Nyere ndị ahịa aka ịhọrọ ihe dị mma
Nnyocha nke ihe ejiri tupu ịbupu
Emekarị, ngwongwo ga-anapụta n'ime 7 15 ụbọchị mgbe iji nkwenye.
E zigara tọn 2 nke Aramid Yarn na Vietnam
Obi dị anyị ụtọ ịkọ na anyị nyefere 2 ahịa nke Aramid Yarn onye ahịa anyị na Vietnam. Aramid Yarn bụ nke a na-ejikarị eme ihe dị ka mgbakwunye na-abụghị nke ọla maka eriri anya ADSS, eriri ndị na-abụghị nke ọla na-abụghị nke ọla na eriri ikuku. (Nkwakọ ngwaahịa na Armaid Yarn) Onye ahịa a bụụrụ anyị onye ahịa ọhụụ. Mgbe nlezianya atụnyere teknuzu oke na ahịa, na-anwale free samples anyị nyere, anyị mesịrị ruo a imekọ ihe ọnụ. Ekwenyere m na nkwado anyị n'ọdịnihu ga-abụ ...
Mbupu nke Tin-ntekwasa ọla kọpa tọrọ atọ Waya
N’ọnwa a, otu waya ụwa wee ziga ọzọ na Algeria. Tin-ntekwasa ọla kọpa tọrọ atọ waya na-bụ-eji maka roba gwara mmanụ Ngwuputa Gịnị, adụ wires, adụ Gịnị na Marine Gịnị dị ka conductive waya isi, na-eji dị ka dị na mpụga ọta ịkpa braiding oyi akwa na ahịhịa akara The tinned ọla kọpa tọrọ atọ waya na-ntekwasa na a mkpa oyi akwa n'elu waya na-enweghị eriri ọla kọpa iji gbochie oxidation nke ọla kọpa. Anyị na-emepụta tinned ...
E zigara iri tọn 12 nke Mylar Tapes na Philippines
Obi dị anyị ụtọ ịkekọrịta na anyị nyefere 12 ahịa nke polyester teepu nye ndị ahịa anyị sitere na Philippines. Nke a bụ usoro nlọghachi ọzọ, ndị ahịa na-azụta ụdị polyester ndị ọzọ buru ibu tupu oge a, ha na-amata ogo ngwaahịa anyị na ike anyị nwere nke ukwuu, n'ihi na anyị nwere ike ịnye ọkpụrụkpụ ọ bụla nke polyester teepu nke ndị ahịa chọrọ, site na 10um ruo 100um, enwere ike ịhazi ụdị ọ bụla dị ka ihe ndị a chọrọ si dị. Na mgbakwunye, anyị na-enye asọmpi ...
Adreesị: Xinsheng Plaza, Hubei Road, Xuzhou, China
Ekwentị mkpanaka: 0086-15162145573